မန်းဂေဇက် ချစ်သူများ စာပေဆု အကြောင်း ဖတ်မိပါသဖြင့် . . . | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Events/Fundraise » မန်းဂေဇက် ချစ်သူများ စာပေဆု အကြောင်း ဖတ်မိပါသဖြင့် . . .
မန်းဂေဇက် ချစ်သူများ စာပေဆု အကြောင်း ဖတ်မိပါသဖြင့် . . .
Posted by သူရဿဝါ on Sep 13, 2012 in Events/Fundraise | 19 comments
ဒီပိုစ့်ဟာ ဒီ မန်းဂေဇက် ဆိုက်အတွက်ပဲ သီးသန့် ရေးမိတဲ့ ပိုစ့်ပါ။ ဇူလိုင်၊ သြဂက်စ် လောက်မှာ စပြီး အခြေပြု (တယ်လို့ ထင်ရတဲ့) မန်းဂေဇက် ချစ်သူများ စာပေဆု ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ကိုအောင်မိုးသူ ဆီကနေ အခုမှ သိရတယ်။ သိသိချင်း ဂေဇက် ထဲမှာ ဒီဆုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပိုစ့်တွေကို လိုက်ရှာ ကြည့်မိတယ်။ ဒီလို ဆုရွေးချယ်ရေး ပုံစံမျိုးကို အခု ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ ခေတ်စား နေတဲ့ Ning Social Website အချို့မှာ ပြုလုပ် နေကြတာကို မြင်ဖူး နေကျပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် သိပ်ပြီး အားမရဘူး။ အဲဒီ ဆိုက် တွေထဲမှာ ရှိတဲ့ စာပေ အဆင့်အတန်းနဲ့ အကဲဖြတ်သူ တွေရဲ့ ဝမ်းစာ (ဒီလူတန်းစား နှစ်မျိုးကို ရှုံ့ချ လိုခြင်း မဟုတ်ပါ။ လက်ရှိ အခြေအနေ အပေါ် တည့်တည့် ရှုမိရုံ ဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီ စကားအပေါ် နားလည် ပေးစေလို ပါတယ်) တွေကို တစေ့ တစောင်း မြင်မိလို့ အားမရ မိသေး တာပါ။
အခု မန်းဂေဇက်က တစ်လ တစ်ကြိမ် ဒီလို ဆုမျိုးကို ရွေးချယ် ပေးမယ် ဆိုတာ သိရတော့ ဝမ်းသာ မိတယ်။ ဒီဆိုက် ထဲက လူအချို့နဲ့ လေးပေါက် (ကိုပေါက်-မန္တလေး) ရန်ကုန်ကို လာတုန်းက တစ်ကြိမ်သာ တွေ့ဖူး ပါတယ်။ ဆိုက်ထဲ မှာလည်း ကျွန်တော်က စာဖတ်ရုံ ဖတ်ပြီး မှတ်ချက် သိပ်ပေးလေ့ မရှိတော့ အွန်လိုင်းမှာလည်း ခင်တဲ့လူ ဒီဆိုက်ထဲမယ် နည်းပါတယ်။ ဒီဆိုက်ထဲက လူတွေနဲ့ ကျွန်တော် ကောင်းကောင်း မသိကျွမ်း ဖူးပေမယ့် ဒီဆိုက် အကြောင်း ကိုတော့ ကျွန်တော် သိပါတယ်။ စာပေ အဆင့် အတန်း မြင့်တယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့၊ စာရေး ကောင်းသူတွေ စာဖတ် “နာ” သူတွေ အများကြီး စုဝေး နေတဲ့ ဆိုက် ဆိုတာကို ကျွန်တော် ခပ်စောစော ကတည်းက သတိပြုမိ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလို ဆိုက်မျိုးက ဒီလို ဆုရွေးချယ် မှုမျိုး လုပ်တဲ့ အပေါ်မှာ အတော် ဝမ်းသာ ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ရသစာပေ ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ ဒီဆိုက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တွေက သမိုင်း မှတ်တိုင် တစ်ခု အဖြစ် ကျန်ခဲ့မယ်လို့ ယုံကြည် ပါတယ်။ စဉ်ဆက် မပြတ် နှစ်ရှည်လများ လုပ်ဆောင် သွားနိုင်ဖို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။
ခုနက စကားစ ပြန်ကောက် ချင်ပါတယ်။ ဒီဆု ရွေးချယ်မှု အကြောင်း သိသိချင်း သက်ဆိုင်ရာ ပိုစ့်တွေကို လိုက်ရှာ ဖတ်ကြည့် မိပါတယ်။ အဲဒီ ပိုစ့်မှာ စာရေးသူက မိမိတို့ အကဲဖြတ် ရွေးချယ်သူ များက အကြိုက်ဆုံး ပိုစ့်ကို ရွေးချယ်မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် “အကောင်းဆုံး ဆု” လို့ သုံးနှုန်း တာထက် “အကြိုက်ဆုံး ဆု” လို့ သုံးနှုန်း တာက ပိုသင့်လျော် တယ်လို့ ထောက်ပြတာ တွေ့ပါတယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော်လည်း သဘောကျ ပါတယ်။ နောက် တစ်ပုဒ်က အန်တီ မပဒုမ္မာ (အန်တီ ခေါ်ရမလား၊ အမ ခေါ်ရမလား မသိ သဖြင့် .. :P) တင်ထားတဲ့ မန်းဂေဇက် စာပေဆု ရွေးချယ်ရေး အတွက် ရွေးချယ်မယ့် သူတွေ စာရင်း နဲ့တကွ ဒီဆုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်း အရာတွေကို အပြည့်အစုံ ရှင်းပြ ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
မအား မလပ်တာ ကြောင့်ရော၊ ဒီဆုကို ရွေးချယ်သူ တစ်ဦး အနေနဲ့ ပါဝင်ဖို့အထိ စာပေ ဝမ်းသာ နုနယ် သေးတာ ကြောင့်ရော၊ ရွေးချယ် ခံရမယ့် ပုဂ္ဂိုလ် စာရင်းထဲ လေးပေါက် တို့နဲ့ အတူ ထည့်သွင်း ထားခြင်း ခံရတာ ကြောင့်ရော ဒီဆုပေးပွဲ အတွက် တစုံတရာ ကူညီမှု မပေးနိုင် ပေမယ့်လို့ “တစ်နှစ် တစ်ကြိမ် ဇန်နဝါရီလ ဒုတိယပတ် တနင်္ဂနွေ နေ့လည်” မှာ ကျင်းပမယ့် ဆုပေးအပ်ပွဲ ရှိရာ ကိုတော့ လာချင် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မန္တလေးမှာ ကျင်းပမှာလား၊ ရန်ကုန်မှာ ကျင်းပ မှာလား ဆိုတာ မသဲကွဲ တာကြောင့် အဲဒါလေးကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်း သိချင် ပါတယ်။ တာဝန် ရှိသူများ ဖြေကြား ပေးစေလို ပါတယ် ခင်ဗျ။ (တစ်ခါတည်း အကြံပေး ချင်တာက အဲဒီ တစ်နှစ် တစ်ခါ ဆုပေးပွဲကို Melody World လိုမျိုး ရန်ကုန် တစ်နှစ်၊ မန္တလေး တစ်နှစ်၊ တောင်ကြီး တစ်နှစ် လုပ်ရင် မကောင်း ဘူးလားလို့ .. .. နောက်တာပါ)။
နောက်ထပ် တွေ့တဲ့ ပိုစ့် တစ်ပုဒ် ကတော့ ဒီလ အတွက် ဆန်ကာတင် ရွေးချယ် ထားတဲ့ ပိုစ့်တွေ ပါဝင်တဲ့ ပိုစ့်ပါ။ ဆန်ကာတင် စာရင်းထဲ ကြည့်လိုက်တော့ သရော်စာ တွေ အများကြီး ပါနေတာ တွေ့ရ ပါတယ်။ ကိုယ်လည်း သရော်စာ အရေးသမား တစ်ပိုင်း ဖြစ်နေတော့ ရေငတ်တုန်း ရေတွင်းထဲကျ ဆိုသလို ဆန်ကာတင် စာရင်းမှာ တွေ့သမျှ ခေတ်မီ ပြောင်မြောက်တဲ့ သရော်စာ ပိုစ့်တွေ အားလုံးကို အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ဖတ်နိုင်ဖို့ ဝမ်းသာ အားရ သိမ်းထား လိုက်မိ ပါတယ်။ ဒီအတွက်လည်း ကျေးဇူး တင်ရပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ပိုစ့်တွေလည်း ယူသွား ပါကြောင်း (တော်ကြာ သရော်စာ တွေချည်း သယ်ထုတ် သွားတယ် ထင်မစိုးလို့ .. :D) ထပ်လောင်း ပြောပါတယ် ခင်ဗျာ။
တကယ် ကတော့ ဒီပိုစ့်ဟာ ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ ဆုရွေးချယ်မှု အကြောင်းကို သိသိချင်း ဝမ်းသာ မိလို့ အူမြူးပြီး ရေးတင် မိတဲ့ ပိုစ့်ပါ။ လစဉ် စဉ်ဆက် မပြတ် နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်သည်အထိ ရွေးချယ် ပေးအပ် နိုင်ပါစေကြောင်းနဲ့ စာကောင်း ပေမွန် ရေးသား သီကုံး နိုင်သူများ ဒီဆိုက် ကနေ တဆင့် မိုးဦးကျ ဖားများ ကဲ့သို့ ပြူပြူ တစ်တစ် ပေါပေါ များများ ထွက်ပေါ် လာနိုင် ပါစေကြောင်း ဆုတောင်း ပေးလိုက် ရပါတယ် ခင်ဗျား။
၁၃ – စက်တင်ဘာ – ၂၀၁၂
မောင်ဝါ၀ါရဲ့ ပထမဆုံး ဂေဇက် အကြောင်းပါကလားဗျို့ 
ကဲ..ကဲ..လူကြီးမင်းတို့ဘိုလုပ်ကြမှာလဲတဲ့.
မောင်ဝါ၀ါပြောသလိုဆို..ကျော်တို့အီသီယိုးပီးသီးယားမှာလဲ တစ်ကြိမ်လောက် ဘူဖေးလာကြွေးကြပါဦးလို့ 
ကျွန်တော်ကလဲ ဖတ်/ရွေး အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တာကြောင့် (သူကြီးဆီကလဲ ၁၅ကျပ်လိုချင်တာကြောင့်) ၀င်ရောက်ဖြေကြားပါရစေဗျာ..
လစဉ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့ စာမူဆုတွေကို တနှစ် နှစ်ကြိမ်လောက်ခွဲပြီး ဂဇက်မင်ဘာများ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ဆုလက်ဆောင်ပေးအပ်ဖို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်။ ပထမအကြိမ် ဂဇက်မင်ဘာများတွေ့ဆုံပွဲကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ အလည်လောက်မှာ ရန်ကုန်မှာပဲ လုပ်ဖြစ်မယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာလုပ်ရခြင်းကတော့ ဂဇက်မင်ဘာတွေအများစုက ရန်ကုန်နဲ့အနီးတ၀ိုက်မှာ ရှိကြလို့ပါ။
မန္တလေးမှာလဲ ဂဇက်မင်ဘာတွေ တော်တော်များလာတာ သတိထားမိပါတယ်။ နောင် လုံလောက်တဲ့ဦးရေရှိလာတဲ့အခါ လှည့်လုပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား..။
အခုလာမယ့် ဂဇက်မင်ဘာများတွေ့ဆုံပွဲကို လဲ ကို သူရဿဝါ တက်ရောက်ချီးမြှင့်ပေးဘို့ ကြိုပြီးဖိတ်ကြားပါတယ်။
ဟာသဥာဏ်ရွှင်ပြီး ရေးလက်ကောင်းတဲ့စာရေးဆရာတယောက်အဖြစ် ကိုယ်တိုင်မိတ်ဖွဲ့တွေ့ဆုံချင်ပါတယ်ခင်ဗျား…။
ရန်ကုန်မှာလည်း ဖြစ်မယ်၊ တနင်္ဂနွေလို နေ့မျိုးလည်း ဖြစ်မယ်၊ ကိုယ်တိုင်လည်း အားလပ်မယ် ဆိုရင်တော့ ရန်ကုန် ဘယ်နေရာ ဖြစ်ဖြစ် နေပူမရှောင် မိုးရွာမရှောင် လာရောက်ဖို့ အဆင်သင့် ရှိကြောင်းပါ ခင်ဗျား။
တနင်္ဂနွေလို နေ့မျိုးလည်း ဖြစ်မယ်၊
အပေါ်က အချက်(၃)ချက်တင် အိုဘားမား နီးနီးဖြစ်နေပြီ ..
တွေ့ဆုံပွဲက ဂဇက်တီးဝိုင်းတို့ ပြဇာတ်တို့လည်း ပါပါတယ်။ ၀ါဆို ထမင်းလည်း ပါတယ်။ နောက် ပြဇာတ် ယိမ်းအဖွဲ့ Dangerous ဆိုတဲ့ အကအဖွဲ့လည်း ပါမယ်ပြောတယ်။ လတ်မှတ်တွေလည်း ရောင်းကြအုန်းမယ် ဆိုလားပဲ။
မောင်ရင့်စာကြောင်းတွေ မောင်လင်းနစ်ထဲမှာဖတ်ဖူးလို့ ရင်နှီးနှင့်ပါပြီ။
“ဒီဆိုက်ထဲက လူတွေနဲ့ ကျွန်တော် ကောင်းကောင်း မသိကျွမ်း ဖူးပေမယ့်
ဒီဆိုက် အကြောင်း ကိုတော့ ကျွန်တော် သိပါတယ်။ စာပေ အဆင့် အတန်း
မြင့်တယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့၊ စာရေး ကောင်းသူတွေ စာဖတ် “နာ” သူတွေ
အများကြီး စုဝေး နေတဲ့ ဆိုက် ဆိုတာကို ကျွန်တော် ခပ်စောစော ကတည်းက
ဆိုတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
နောက်ဆိုရင် Comment ပေးတော့နော်။
သူရရေ မင်းတို့အဖွဲ့ ကဖျော်ဖြေပေးမယ်ဆိုရင် ပွဲလေး ပိုစည်သွားမယ်ထင်ပါတယ်။
မလုပ်ပါနဲ့ လေးပေါက်ရယ် .. ဒီလိုပွဲမျိုးတော့
စာရေးဆရာ အနေနဲ့ တည်တည်ခန့်ခန့်လေး တက်ပါရစေ ..း)
ဘယ်လိုတည်တည်ခန့်ခန့်လည်း ၀ါဝါရဲ့ လုပ်စမ်းပါဦး။ အဲလိုဆိုရင်တော့ မင်းမျက်နှာကို အရင်ပေါင်းတည်ခဲ့မှရမယ်နော်…
တည်အောင်နေရင် တည်ပါတယ်ဗျ .. မယမင်းကလဲ ..
ကန်ဘောင် မှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ VCD လို တည် မှာလား .. လို့ မေးပါရစေ .. :-)
ပေါင်းတင်စရာ မလိုပါဘူး မနောရယ်။ သူကချောပြီးသားပါ။ ကျောက်ကျောရေပက်ထားတဲ့ မျက်နှာမျိုး။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မန်းဂေဇက်ချစ်သူများနေ့ 
မောင်သူရရေ- (ဇာဂနာကို ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ) ;)
ဒီပိုစ့်ဟာ ဒီ မန်းဂေဇက် ဆိုက်အတွက်ပဲ သီးသန့် ရေးမိတဲ့ ပိုစ့်ဆိုလို့ ၀မ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်။
လူချင်းမမြင်ဖူး မတွေ့ဖူးပေမယ့် စာပေအနေနဲ့တော့ သိကျွမ်းခင်မင်ပြီးသားမို့ စိတ်ထဲကတော့ ရင်းနှီးနေပါတယ်။
မောင်သူရတို့လို စာပေသမားကောင်းတွေရဲ့စာတွေကြောင့်လည်း ဒီဆိုဒ်ဟာ ပိုမိုပြီးကောင်းမွန်ပြည့်စုံလာတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ဆိုတာလည်း သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ (လူငယ်တွလည်း ကြက်သွန်နဲ့ရောပြီး ငြုပ်သီးပါအထောင်းခံရတယ်လို့ပဲ သဘောထားကြီးပေးပါ) ပဲများပြီး၊ စာပေးဝမ်းစာဆိုတာကလည်း ပြည့်တဲ့သူလည်းပါ၊ မပြည့်တဲ့သူ (ကိုယ်တိုင်) လည်း ပါပါတယ်။
ဖတ်ရွေးတဲ့အခါ ကိုယ့်အကြိုက်ကို ရွေးတာမို့ စာပေအဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ အနှစ်ပါတဲ့စာတွေ ရွေးတဲ့အထဲ ပါမသွားပဲ ကျန်ခဲ့ရင် ရွေးတဲ့သူရဲ့ စာပေ၀မ်းစာကြောင့်ဆိုပြီး နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
မောင်သူရတို့လို စာပေ၀မ်းစာပြည့်တဲ့ လူငယ်တွေ ဖတ်ရွေးပေးနိုင်တဲ့အခါကျရင်တော့ ပိုမိုပြည့်စုံကောင်းမွန်သော စာများကို ရွေးချယ်ပေးနိုင်မှာပါ။
လုပ်စမ်းဘာဗျ…ဒီလိုဂလေး…။ ဂဇက်မှာရေးဖို့ သိပ်ဂေါင်းစားစရာ လိုပါဘူး။ စိတ်ထဲရှိရာ ချရေးလိုက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရွာသားစစ်စစ် ဖြစ်ချင်ရင်ပြောပါတယ်။
ကိုဝါ၀ါရေ..ဂဇက်အတွက် သီးသန့်ရေးတဲ့စာဆိုတဲ့အတွက် ၀မ်းသာမိပါတယ်…
ကိုဝါ၀ါ့ ပို့စ်တွေအောက်က ကွန်မန့်တွေနဲ့လည်း ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့…
ပွဲကျင်းပဖို့ ရံပုံငွေအတွက် ဘောလုံးပွဲတွေဘာတွေ လုပ်ဦးမှာလားဟင်…. လုံမလေးတို့ ကြိုပြီး အသင်းဖွဲ့ထားလိုက်ရတော့မလား…
နောက် ၂နှစ်..အိုဘားမား မြန်မာပြည်လာတဲ့နှစ်မှာ.. ကိုရင်ကြောင်ကြီးက.. အပြန်အလှန်ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့.. ဂဇက်ပွဲကို သူနေတဲ့ နွားရူးရောက်မှာ စရိပ်ခံလုပ်ပေးမယ်တဲ့ဗျ..
ရွာသူအပျိုတွေဆို.. လေယဉ်ခတင်မက.. ဟော်တယ်တည်းခပါ တာဝန်ယူမယ်ဆိုလားပဲ..။
သဂျီး မြန်မာစာဂုဏ်ထူးရတယ်ဆိုတာ တကယ်??
ဒီပို့စ်အရကော်မန့်တွေကိုကြည့်ရရင်ဖြင့် … ဂေဇက်က မန်ဘာဝင်တွေက လူချောတွေပဲ … ဆုပေးပွဲကြရင်တော့ အော်တိုစာအုပ်နဲ့ ကင်မလာကောင်းကောင်းလေးတော့ ဆောင်သွားမှ အချောအလှတွေကို အော်တိုထိုးခိုင်းပြီး ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်မယ် …. ဟီး ဟီးးး